ဘဒန်းတွေဝတ်၊ အပန်းဖြေခရီးတွေ သွားပြီးပျော်နေတဲ့ သူတွေကို ထိထိမိမိပြောဆို သတိပေးလိုက်တဲ့ နိုဗန်ထူး – Shwe Likes
The Voice Myanmar သီချင်း ဆိုပြို င်ပွဲရဲ့ Winner တစ်ေ ယာက်ြ ဖစ်သူ နိုဗန်ထူး ကတော့ လက်ရှိ မှာ သူဝါသ နာပါတဲ့ ဂီတ လမ်းကြော င်းထက် တစ်နိုင်ငံ လုံးစစ်အာ ဏာရှင် လက်အော က်ကျရောက်ေ န မှုမှာ လွတ်ေြ မာက်န ယ်မြေမှာ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ရုန်းထွ က်နေသူ တစ်ယော က်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာေ တာ့ နိုဗန်ထူးက Brand တွေဝတ် စားကောင်းသောက်ကော င်းတွေစားရင်း အပျော်ခ ရီးတွေသွား လာနိုင်သူတွေကို သတိပေးစ ကားပြော လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နိုဗန်ထူး က “Brand တွေဝတ်ပြီးြကွားနေကြတုန်း လား? စားကော င်းသောက်ကောင်းတွေနဲ့ကြွယ်နေကြ တုန်းလား? အပန်းဖြေ ခရီးတွေထွ က်နေကြတုန်းလား ? အဲ့အတို င်းသာ ဆက်သွားနေရင် ခင်များတို ့လည်း ဖက်ဆစ်စစ်တပ်ရဲ့ ောက်ကျ င့်ယုတ်မှုခံရေ တာ့မှာ အနှေးနဲ့ အမြန်ဘဲ။
တိုက်ပွဲတွေ ပိုပြင်းထ န်လာရင် ပြည်မမှာကျန်တဲ့ ခင်များတို့ပိုင် ဆိုင်မှုတွေ လုယက် စားသောက် ရင်း နောက်ဆုံးအချိန်ထိ သူတို့ဖျက်ဆီးသွားမှာကို မမေ့နဲ့ ။” ဆိုပြီး သတိပေးလာခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နိုဗန်ထူး ကတော့ Brand တွေဝတ်၊ အပန်းဖြေခ ရီးတွေသွားပြီး စားသော က်နေပြီး ဘာမှမဖြစ်သလို သွေးအေးေ နကြသူတွေလ ည်း တချိန်ချိန်မှာ စကစရဲ့ အကျင့်ယုတ်မှု ခံရမှာ အနှေး၊ အမြန်ပဲဆိုပြီး သတိပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Source: Novem Htoo ‘s fb
The Voice Myanmar သီခ်င္း ဆိုၿပိဳ င္ပြဲရဲ့ Winner တစ္ေ ယာက္ျ ဖစ္သူ နိုဗန္ထူး ကေတာ့ လက္ရွိ မွာ သူဝါသ နာပါတဲ့ ဂီတ လမ္းေၾကာ င္းထက္ တစ္နိုင္ငံ လုံးစစ္အာ ဏာရွင္ လက္ေအာ က္က်ေရာက္ေ န မႈမွာ လြတ္ေျ မာက္န ယ္ေျမမွာ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း ႐ုန္းထြ က္ေနသူ တစ္ေယာ က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔မွာေ တာ့ နိုဗန္ထူးက Brand ေတြဝတ္ စားေကာင္းေသာက္ေကာ င္းေတြစားရင္း အေပ်ာ္ခ ရီးေတြသြား လာနိုင္သူေတြကို သတိေပးစ ကားေျပာ လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
နိုဗန္ထူး က “Brand ေတြဝတ္ၿပီး ျ ကြားေနၾကတုန္း လား? စားေကာ င္းေသာက္ေကာင္းေတြနဲ့ႂကြယ္ေနၾက တုန္းလား? အပန္းေၿဖ ခရီးေတြထြ က္ေနၾကတုန္းလား ? အဲ့အတို င္းသာ ဆက္သြားေနရင္ ခင္မ်ားတို ့လည္း ဖက္ဆစ္စစ္တပ္ရဲ့ ောက္က် င့္ယုတ္မႈခံေရ တာ့မွာ အေႏွးနဲ႔ အျမန္ဘဲ။
တိုက္ပြဲေတြ ပိုျပင္းထ န္လာရင္ ျပည္မမွာက်န္တဲ့ ခင္မ်ားတို႔ပိုင္ ဆိုင္မႈေတြ လုယက္ စားေသာက္ ရင္း ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ထိ သူတို႔ဖ်က္ဆီးသြားမွာကို မေမ့နဲ႔ ။” ဆိုၿပီး သတိေပးလာခဲ့ တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
နိုဗန္ထူး ကေတာ့ Brand ေတြဝတ္၊ အပန္းေျဖခ ရီးေတြသြားၿပီး စားေသာ က္ေနၿပီး ဘာမွမျဖစ္သလို ေသြးေအးေ နၾကသူေတြလ ည္း တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ စကစရဲ့ အက်င့္ယုတ္မႈ ခံရမွာ အေႏွး၊ အျမန္ပဲဆိုၿပီး သတိေပးလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Source: Novem Htoo ‘s fb
လက်ရှိရည်းစားကြီး ရှိရဲ့နဲ့တောင် ဖောက်ပြန်ခဲ့ကြတဲ့ ယွန်းယွန်းနဲ့စည်သူဝင်း အကြောင်း အားလုံးသိအောင် ချပြလာတဲ့ စည်သူဝင်းရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေး
ပရိသတ်ေ တွကြား ပွဲဆူနေ တဲ့ မာကင် စုံတွဲ ရွှေရွှေ တို့ရဲ့ Interview ဗွီဒီယိုဖိုင်